Kismaayo News » Uhuru oo loo xukumay hogaaminta Kenya
Uhuru oo loo xukumay hogaaminta Kenya
Kn: Murankii iyo ismariwaagii hareeyay doorashadii madaxtinimada ee dalkaasi Kenya ka dhacday ayaa ugu danbayn maxkamadda Sare waxay xukuntay in natiijadii doorashadii ku celiska ahayd ee Kenya ay ahayd mid xalaal ah.
Maxkamaddan oo horay u xukuntay doorashadii ku celiska ahayd kadib markay guusha Uhuru aqbaliwaayeen xisbiga mucaaradka ee Odinga hogaaminayay ayaa markani xukuntay in Uhuru yahay madaxweynaha shanta sano ee soo socota.
Doorashadii ku celiska ahayd waxaa qaadacay inay ka qayb qaataan Odinga iyo xisbigiisa laakiin looma joojin ee doorashadii waxay dhacday la’aantood. Hadaba doodda Maxkmadda Sare ay la kala hortageen labada dhinac ayaa ahayd, mucaaradka oo ku doodayay in Uhuru kaligii doorasho galay sidaasna aysan sax ku ahayn nidaamka doorashooyinka ee caalamka iyo kan Kenya, halka xisbiga madaxweynuhu ay ku doodayeen in doorashadu ay furnayd laakiin hadii xisbiga kale diido inuu qayb ka noqdo ayna sharci ahayn in loo joojiyo, dimuqraadiyadduna tahay in qof kasta oo xaq u leeyahay inuu codeeyo, is sharaxo iyo inuu gurigiisa iska harsado oo dantiisa kale raacdo.
Tan iyo intii doorashada ku celiska ah dhamaatay, dalka Kenya waxaa ka jiray rabshado ay dad ku dhinteen, hanti badanna ku baaba’day, waxaana laga cabsi qabaa go’aanka maxkamaddu inuu sii kordhiyo maalmaha soo aadan rabshadaha. Balse go’aanka maxkamadda sare wuxuu soo afjarayaa muranka ah yaa madaxweyne ka ah Kenya, taasina waxay hadda wixii ka danbeeya sharciyad buuxda siinaysaa Uhuru Kenyata inuu talaabo ka qaado kooxaha qaswadayaasha ah ee xasiloonada iyo nabadgaliyada wax u dhimaaya.